စမတ်ဖုန်းများရဲ့ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း နည်းပညာ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ အပိုင်း (၂) – DigitalTimes.com.mm
186 Shares 82 Views
Android Device များမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်း နည်းပညာများထည့်သွင်းပေးထားတာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာနေပါပြီ။ အခုတော့ Apple ကလည်း iPhone X, iPhone 8 နဲ့ iPhone 8 Plus များမှာ ဒီနည်းပညာကို ပထမဆုံး ထည့်သွင်းပေးလာပါတယ်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်း နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
(စမတ်ဖုန်းများရဲ့ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း နည်းပညာ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ အပိုင်း (၁)ကို ဒီလင့်မှာ ဖတ်ပါ။ )
ကားထဲမှာ ကြိုးမဲ့ အားသွင်းစနစ်ကို သုံးနိုင်သလား ?
ကားထုတ်လုပ်သူများဟာ ကားများမှာ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်များကို ထည့်သွင်းပေးလာကြပါပြီ။ သင့် စမတ်ဖုန်းကို ကားထဲမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကြိုးမဲ့အားသွင်းရင်တော့ Apple CarPlay , Android Auto တို့ကို အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ Apple CarPlay , Android Auto တို့ဟာ ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်မှသာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ BMW က မကြာခင်က5Series များမှာ Wireless CarPlay ကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက် အနာဂတ်မှာ ဒီနည်းပညာများကို ပိုမို တွင်ကျယ်စွာ သုံးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Audi က သူ့ရဲ့ Phone Box System မှာ Qi Wireless Charger ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သင့်ဖုန်းဟာ Qi အားသွင်းစနစ်ကို ထောက်ပံ့ရင် Phone Box မှ Pad ပေါ်တင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြား ဖုန်းများအတွက်တော့ Qi ကို ထောက်ပံ့တဲ့ Case လိုအပ်လာပါတယ်။ Audi က Qi Wireless Charging Pad နဲ့ တွဲဖက် သုံးနိုင်အောင် iPhone အဟောင်းများအတွက် Qi Case ကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
BMW ကလည်း သူ့ရဲ့ ကားများမှာ အလားတူ စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။7Series များမှာ Wireless Charging ပါတဲ့ မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ BMW ရဲ့ အခြား မော်ဒယ်အားလုံးမှာလည်း အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ Wireless Charging Adapter ကို ထည့်သွင်း၍လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ Audi လိုပဲ BMW ဟာ Qi Charging Pad နဲ့ တွဲဖက် သုံးနိုင်တဲ့ Qi Wireless Charging Case ကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Lexus NX Series များမှာလည်း Wireless Charger ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Qi Case ကိုလည်း ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တိုယိုတာကလည်း သူ့ရဲ့ မော်ဒယ် အချို့မှာ Qi Wireless Charging ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်များ
သင့်ဖုန်းကို သင့်အိမ်နဲ့ ကားထဲမှာပဲ ကြိုးမဲ့အားသွင်းလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ McDonalds နဲ့ Starbucks တို့က သူတို့ရဲ့ အရောင်းဆိုင်များမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Starbucks က Powermat Wireless Charging ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ McDonalds က Qi Wireless Charging ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ဆွီဒင် ပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်သူ Ikea ကလည်း Qi Wireless Charging ပါတဲ့ ပရိဘောဂများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။ စားပွဲခုံများ၊ မီးအိမ်များမှာ ဒီနည်းပညာ ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးများ
•	လုံခြုံစိတ်ချစွာ အားသွင်းနိုင်ခြင်း။
•	ဖုန်းကို Charging Pad အပေါ်ကို တင်လိုက်တာနဲ့ လွယ်ကူစွာ အားသွင်းနိုင်ခြင်း။
•	အားသွင်းကြိုးများနဲ့ အလုပ်ရှုပ်စရာ မလိုခြင်း။
•	နေအိမ်အပြင်ဘက်နဲ့ အားသွင်း ပလက်ပေါက်များ မရှိတဲ့ နေရာများမှာလည်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်းနိုင်ခြင်း။
•	5 Watts ကိုသာ ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် ကြိုးမဲ့ အားသွင်းရင် နှေးကွေးခြင်း။
•	ဖုန်းများမှာပါတဲ့ Quick Charge နည်းပညာဟာ အကျိုးမသက်ရောက်ခြင်း။
•	ဖုန်းကို အားသွင်း Pad အပေါ်ကို တင်ထားရတဲ့အတွက် အားသွင်းနေစဉ်မှာ အသုံးပြုလို့ မရခြင်း။
•	ကြိုးမဲ့အားသွင်း Adapters နဲ့ Cases များဟာ ဈေးနှုန်းကြီးမားခြင်း။
•	Apple CarPlay နဲ့ Android Auto တို့နဲ့ တွဲဖက် မသုံးနိုင်ခြင်း။
စမတျဖုနျးမြားရဲ့ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး နညျးပညာ အကွောငျး သိကောငျးစရာမြား အပိုငျး (၂)
Android Device မြားမှာ ကွိုးမဲ့အားသှငျး နညျးပညာမြားထညျ့သှငျးပေးထားတာ နှဈအနညျးငယျကွာနပေါပွီ။ အခုတော့ Apple ကလညျး iPhone X, iPhone 8 နဲ့ iPhone 8 Plus မြားမှာ ဒီနညျးပညာကို ပထမဆုံး ထညျ့သှငျးပေးလာပါတယျ။ ကွိုးမဲ့အားသှငျး နညျးပညာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
(စမတျဖုနျးမြားရဲ့ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး နညျးပညာ အကွောငျး သိကောငျးစရာမြား အပိုငျး (၁)ကို ဒီလငျ့မှာ ဖတျပါ။ )
ကားထဲမှာ ကွိုးမဲ့ အားသှငျးစနဈကို သုံးနိုငျသလား ?
ကားထုတျလုပျသူမြားဟာ ကားမြားမှာ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈမြားကို ထညျ့သှငျးပေးလာကွပါပွီ။ သငျ့ စမတျဖုနျးကို ကားထဲမှာ ကွိုးမဲ့အားသှငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ကွိုးမဲ့အားသှငျးရငျတော့ Apple CarPlay , Android Auto တို့ကို အသုံးပွုလို့ မရပါဘူး။ Apple CarPlay , Android Auto တို့ဟာ ကွိုးနဲ့ခြိတျဆကျမှသာ အလုပျလုပျပါတယျ။ BMW က မကွာခငျက5Series မြားမှာ Wireless CarPlay ကို ထညျ့သှငျးပေးခဲ့တဲ့အတှကျ အနာဂတျမှာ ဒီနညျးပညာမြားကို ပိုမို တှငျကယျြစှာ သုံးနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Audi က သူ့ရဲ့ Phone Box System မှာ Qi Wireless Charger ကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ သငျ့ဖုနျးဟာ Qi အားသှငျးစနဈကို ထောကျပံ့ရငျ Phone Box မှ Pad ပျေါတငျပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အခွား ဖုနျးမြားအတှကျတော့ Qi ကို ထောကျပံ့တဲ့ Case လိုအပျလာပါတယျ။ Audi က Qi Wireless Charging Pad နဲ့ တှဲဖကျ သုံးနိုငျအောငျ iPhone အဟောငျးမြားအတှကျ Qi Case ကို ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။
BMW ကလညျး သူ့ရဲ့ ကားမြားမှာ အလားတူ စနဈကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။7Series မြားမှာ Wireless Charging ပါတဲ့ မျောဒယျမြားကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ BMW ရဲ့ အခွား မျောဒယျအားလုံးမှာလညျး အသငျ့သုံးနိုငျတဲ့ Wireless Charging Adapter ကို ထညျ့သှငျး၍လညျး သုံးနိုငျပါတယျ။ Audi လိုပဲ BMW ဟာ Qi Charging Pad နဲ့ တှဲဖကျ သုံးနိုငျတဲ့ Qi Wireless Charging Case ကို ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။
Lexus NX Series မြားမှာလညျး Wireless Charger ကို သုံးနိုငျပါတယျ။ Qi Case ကိုလညျး ကုမ်ပဏီက ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။ တိုယိုတာကလညျး သူ့ရဲ့ မျောဒယျ အခြို့မှာ Qi Wireless Charging ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈကို ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ စားသောကျဆိုငျမြား
သငျ့ဖုနျးကို သငျ့အိမျနဲ့ ကားထဲမှာပဲ ကွိုးမဲ့အားသှငျးလို့ရတာ မဟုတျပါဘူး။ McDonalds နဲ့ Starbucks တို့က သူတို့ရဲ့ အရောငျးဆိုငျမြားမှာ ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ Starbucks က Powermat Wireless Charging ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယျ။ McDonalds က Qi Wireless Charging ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယျ။ ဆှီဒငျ ပရိဘောဂ ထုတျလုပျသူ Ikea ကလညျး Qi Wireless Charging ပါတဲ့ ပရိဘောဂမြားကို ထုတျလုပျရောငျးခနြပေါတယျ။ စားပှဲခုံမြား၊ မီးအိမျမြားမှာ ဒီနညျးပညာ ထညျ့သှငျးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈရဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ ဆိုးကြိုးမြား
•	လုံခွုံစိတျခစြှာ အားသှငျးနိုငျခွငျး။
•	ဖုနျးကို Charging Pad အပျေါကို တငျလိုကျတာနဲ့ လှယျကူစှာ အားသှငျးနိုငျခွငျး။
•	အားသှငျးကွိုးမြားနဲ့ အလုပျရှုပျစရာ မလိုခွငျး။
•	နအေိမျအပွငျဘကျနဲ့ အားသှငျး ပလကျပေါကျမြား မရှိတဲ့ နရောမြားမှာလညျး ကွိုးမဲ့ အားသှငျးနိုငျခွငျး။
•	5 Watts ကိုသာ ထောကျပံ့တဲ့အတှကျ ကွိုးမဲ့ အားသှငျးရငျ နှေးကှေးခွငျး။
•	ဖုနျးမြားမှာပါတဲ့ Quick Charge နညျးပညာဟာ အကြိုးမသကျရောကျခွငျး။
•	ဖုနျးကို အားသှငျး Pad အပျေါကို တငျထားရတဲ့အတှကျ အားသှငျးနစေဉျမှာ အသုံးပွုလို့ မရခွငျး။
•	ကွိုးမဲ့အားသှငျး Adapters နဲ့ Cases မြားဟာ ဈေးနှုနျးကွီးမားခွငျး။
•	Apple CarPlay နဲ့ Android Auto တို့နဲ့ တှဲဖကျ မသုံးနိုငျခွငျး။